तिथि मेरो पत्रु » छेडखानी कला
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Nov. 29 2020 |4मिनेट पढ्न
छेडखानी बस मजा भन्दा बढी यो मौलिक छ छ. एक प्रजाति हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्व मानव जडान निर्भर. हामी प्रेमलीला रोकियो भने, प्रेम मा गिरने, र हामी चाँडै गायब चाहन्छु reproducing. प्रकृति सबै आवश्यक भागमा हामीलाई संपन्न छ तापनि तर हामी लोप आफूलाई बचाउन आवश्यक, सबैले आफ्नो सबै भन्दा राम्रो लाभ गर्न तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने थाह. यो प्रेमलीला गर्न आउँदा यो विशेष साँचो हो.
चार्लेन, एक ठूलो लुगा श्रृंखला एक प्रबन्धक, र Kira, एक Physiotherapist, कारवाहीलाई को बीचमा एक तालिका प्राप्त प्रारम्भिक पर्याप्त लोकप्रिय नाइट क्लब गालापागोस मा आउनुहुन्छ, पल्ट को एक महान विचार र नाच्न संग. राम्रो चाँडै भीड मा भौंतारिन्छन् र ठाउँ माथि भरिन्छ. दुवै महिलाहरु fashionably लुगा र तिनीहरूले यहाँ हौं जस्तै लग रहे. चार्लेन Kira गर्न वार्ता, त्यो कोठा स्कैन र उनको कपाल को केही छाडा किसिमहरु संग fiddles. मिनेट को हरेक दम्पतीले त्यो उनको शरीर wiggles र, समय-समयमा, तालिका मा उनको कोहनी हाल्छ र उनको हात मा उनको टाउको राख्ने, pouting र पल्ट मा पुरुष यसलाईर् आँखा बनाउने. चार्लेन त्यो सेक्सी हुनुको गर्नुपर्छ सोच्छ, तर त्यो होइन. त्यो मान्छे को के धेरै गरिरहेको गर्नुपर्छ, पुरुष र महिला दुवै, तिनीहरूले खोज मा बाहिर हुँदा के: त्यो प्यारा हुनुको संग सेक्सी हुनुको भ्रामक छ. वास्तवमा, उनको कार्य मात्र उनको असुरक्षित र बचकाना हेर्न बनाउन, अपरिपक्व ऊर्जा बन्द दिने.
अनुमान, अर्कोतर्फ, तयार र रचना देखिन्छ. अधिकांश समय त्यो चुपचाप बस्छन, उनको टाउको यति थोरै कहिल्यै कम, र चार्लेन ध्यान दिनुहुन्छ. कहिले काँही, त्यो उसलाई पेय घूंट रूपमा, उनको आँखा गिलास को शीर्ष मा चियाउने र त्यो बिस्तारै कोठा मा लिन्छु. वास्तवमा, तपाईं राम्ररी हेर्न भने, Kira चार्लेन को आधा गति परिचालन देखिन्छ. त्यो विश्वास र सुरक्षित देखिन्छ र हुर्केपछि यौन ऊर्जा बन्द दिने छ.
अब Kira हार्वे देख्यो छ, एक मान्छे उनले हालै एक पार्टी मा देखे तर ठीक कहिल्यै भेट. त्यो उहाँलाई बहामासको नौकायन बारेमा कुरा overhear गर्न साँझ पर्याप्त नजिक भएको चाहन्छु, र त्यो आकर्षक र रोचक लाग्यो थिए (Kira नौकायन प्रेम). अनि अहिले यहाँ उहाँले अरू मान्छे को एक जोडी संग छ, पट्टी विरुद्ध झुकाव. Kira उनको परिधीय दर्शनमा उसलाई राख्छ र उसलाई दिशा मा बारी को लागि पर्खनुहुन्छ.
जस्तै नै त्यो जस्तैगरी, Kira तीन भाँचिदिन्छ, बहाना आफु, तालिका देखि उठेर, र कौसी सम्म भऱ्याङ तिर saunters, सही हार्वे र आफ्नो मित्र पछिल्लो, कम्मर सजिलै लहराते, अलिकति तल टाउको. (किन कम टाउको? हामी मानिसहरूलाई brashness भन्दा coyness गरेर अझ intrigued हुन लाग्न किनभने।) त्यसपछि Kira नजरमा सम्पर्क छिटो पल को लागि उनको लक्ष्य मा तय. उहाँले हेर्छ. त्यो हार्वे थाह दोस्रो उसलाई देखेको छ, त्यो coyly दूर देखिन्छ. तर हार्वे प्रतिक्रिया समय छ पहिले, Kira फेरि उहाँलाई हालन, त्यो एक मुस्कान को एक सङ्केत प्रदान गर्दछ रूपमा यो समय कहिल्यै त्यसो अलिकति उनको आँखा बन्द. हार्वे सन्देश हुन्छ.
प्रतिज्ञा-झिक्न दिनचर्या प्रेमलीला को धेरै हृदय छ. यो इच्छा सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ.
के तपाईं बस पालन वैज्ञानिकहरूले Kira को भाग मा एक प्रतिज्ञा-झिक्न तालिका र हार्वे को भाग मा एक उत्तेजना प्रतिक्रिया भन्छन्. यो अधिकार तल आउँदा, उत्साह सिर्जना सबै तनाव र विमोचन छ, तपाईं डरावना चलचित्र बारेमा कुरा गरिरहनुभएको कि, रोलर coasters, वा मानव कामुकता. Kira हार्वे मा प्रयोग गरेको प्रतिज्ञा-झिक्न दिनचर्या प्रेमलीला को धेरै हृदय छ. मानिसहरू र उत्तेजना सिर्जना गर्न महिला दुवैले प्रयोग गरिन्छ, र यसको गतिशील यो छ के भन्छ ठीक छ: ध्यान दिने, त्यसपछि दूर लिने, तनाव फेरि दिने त, विज्ञप्ति जारी, तनाव; आँखा सम्पर्क, दूर हेर्न, आँखा सम्पर्क. एक नजर जरूरी कुनै अर्थ छैन, तर Kira एक उत्तेजक तरिकामा sauntered, हार्वे दोस्रो पुलुक्क, र अलिकति coyness सुझाव कम उनको टाउको संग मुस्कुराउँदै. यो सबै चासो को एक सुस्पष्ट संकेत भन्छन्. सबै दुनिया भर पुरुष र महिला यस आधारभूत नियमित प्रयोग, महिला saunter वा मानिसको अफसर आधारित, आँखा सम्पर्क र एक मुस्कान सँगसँगै, संकेत र अर्को व्यक्ति चासो जगाउने.
त्यसैले Kira tacitly निमन्त्रणा र क्षण पछि हार्वे जवाफ प्रस्ताव छ. उहाँले स्पष्ट Kira तल नाच्न मा तल देख देख्न सक्छौं जहाँ कौसी गर्न भऱ्याङ आउछ. उहाँले आँखा उनको देखिन्छ, मुस्कान, र आफूलाई परिचय. “अर्को पेय?” हार्वे सोध्छन्.
“धन्यवाद, तर . . .” Kira मुस्कान र उत्तरहरु, “म एक मित्र संग यहाँ छु र हामी उनको पदोन्नति मना छौं, त्यसैले म साँच्चै फिर्ता उनको प्राप्त गर्नुपर्छ।”
“खैर,” हार्वे उत्तरहरु, “तपाईं संग मनाउन मलाई आमन्त्रण सक्छ. वास्तवमा, म केही शैंपेन किन्न खुसी हुन चाहन्छु. यो bubbly किन्न एउटा वास्तविक बहाना सधैं राम्रो छ।” उहाँले बिताए.
Kira हार्वे गयौं भने चार्लेन आपत्ति छैन भनेर थाह भए तापनि, उनी भन्छिन्, “त्यो तपाईं को धेरै उदार छ, तर हामी आफूलाई बालिका प्रतिज्ञा’ रात बाहिर. तपाईं थाह, व्यक्तिगत सामान मा पकड।” त्यो उनको टाउको inclines, छोटकरीमा उहाँलाई हेर्दै, त्यसपछि दूर हालन.
हार्वे सोध्छन्, “कसरी भोलि त त्यही समय बारेमा, एउटै ठाउँमा, वा एउटै समय, विभिन्न ठाउँ, वा . . . ?”
Kira उहाँ हाँस्नुहुन्छ. “माफ गर्नुहोस्, म स्वतन्त्र भोलि होइन. तर तपाईंले मलाई आफ्नो नम्बर दिन भने, म मेरो तालिका हेर्न पछि म तिमीलाई बोलाउछु. म केही समयपछि मा केहि गर्न सक्छन् निश्चित छु।”
यो सत्य हो, Kira त्यो हार्वे संग एक बिट बढी समय खर्च भने चार्लेन परवाह छैन भनेर थाह. त्यसै गरी, उनले योजना छ सबै लुगा धुने छ कि व्यस्त निम्न रात छैन. के Kira गरिरहेको छ उनको प्रेमलीला रणनीति को भाग रूपमा कमी को सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त सिद्धान्त प्रयोग छ.
कमी को सिद्धान्त:
आफूलाई थप आकर्षक बनाउन कसरी
सामान्यतया, मानव जगतले तिनीहरूले हुन सक्दैन के को बढी चाहन्छन्, यति प्रेमलीला गर्दा आफ्नो वांछनीयता वृद्धि गर्न एक सरल तरिका कमी को सिद्धान्त प्रयोग गर्न छ. विचार तपाईं लोकप्रिय र मांग गर्दै छन् कि छाप दिन छ.
हो, मान्छे (र पनि कम्पनीहरु) यस चाल सबै समय प्रयोग, तर यो हाम्रो प्रतिक्रिया हामी यो गिर रोक्न कहिल्यै भनेर instinctual छ. उदाहरणका लागि, सबैलाई यो सबै भन्दा राम्रो रेस्टुरेन्ट मा आरक्षण प्राप्त गर्न बुझ्न गाह्रो छ भनी थाह, सबै टेबल साँच्चै माथि बुक हो किनभने तर जरूरी छैन. त्यसै गरी, फेसन डिजाइनर आफ्नो लाइनहरु marketed जहाँ बारे मा धेरै विशेष हो, र आफ्नो उच्च मूल्य ट्याग भन्दा खरीदारों बाहिर गर्न सेवा. जब रेडियो, टेलिभिजन, र मुद्रण विज्ञापनदाताहरु जस्तै बयान हामीलाई बमबारी “आपूर्ति अन्तिम गर्दा,” “ग्राहक प्रति दुई सिमित,” “लिमिटेड संस्करण,” र “केवल आइतबार सम्म राम्रो प्रस्ताव,” तिनीहरूले कमी को सिद्धान्त काम गर्दै.
कमी को सिद्धान्त काम
यस सिद्धान्त मदत फाइदा लिइरहेका कसरी कसैले तपाईंलाई प्रेम पर्नु बनाउन? बढा गरेर आफ्नो “मूल्य” एक सम्बन्ध प्रारम्भिक चरणमा, तपाईं दुर्लभ लाग्न बनाउने, बहुमूल्य, र लायक पछ्याइरहेका.
एक पत्रु प्रेमको लागि